Hadda waxaa loo heli karaa beta-saddexaad ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S10 | Androidsis
Laga soo bilaabo Oktoobar ee la soo dhaafay, dhammaan isticmaalayaasha qayb ka ah barnaamijka beta ee laga heli karo arjiga xubnaha Samsung waxay fursad u leeyihiin inay tijaabiyaan beta-ka Android 10 ee Galaxy S10. Laga soo bilaabo Kuuriya ayaa hadda bilaabay beta saddexaad, beta ayaa hadda laga heli karaa Jarmalka, Kuuriya iyo Mareykanka.
Waa in la xusuusnaado in kaladuwanaanta kala duwan ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S10 si tartiib tartiib ah looga bilaabay dalal dhowr ah. Qeybtii ugu horreysay ee waddammada qaata waa Jarmalka, Kuuriya iyo Mareykanka, tan labaadna waxaa jira Spain iyo wadamada intiisa kale ee S10 iyo S10e iyo S10 + labadaba laga suuq geeyo.
Beta-kan saddexaad, oo lambarkiisa firmware-ku yahay G97 ** XXU3ZSK3 wuxuu diiradda saarayaa hagaajinta cayayaanka kaladuwan ee la ogaaday tan labaad markii la bilaabay. Sannadkan, si ka duwan kuwii hore, habdhaqanka beta ayaa ka sii fiicnaanaya mana keeneyso dhibaato weyn oo xagga waxqabadka ah.
Qoraalka lagu sii daayay ayaa sheegaya in Samsung DeX kuma jaanqaadi karto nooca hadda socda, wax wiilasha ka yimid SamMobile ay awoodaan inay xaqiijiyaan. Samsung waa inay soo saartaa nooc cusub oo loogu talagalay labada PC iyo Mac, inkasta oo xilligan aysan cayimin goorta ay sidaas sameyn doonto.
Waa in la xusuusnaadaa inay tahay beta, iyo sidii beta wanaagsan ay tahay ma bixiso waxqabad la mid ah nooca ugu dambeeya, Markaa waa in had iyo jeer lagu xisaabtamo marka la galayo barnaamijka tijaabada oo keliya Samsung, laakiin soo saare kasta oo kale, gaar ahaan haddii taleefannadeenna casriga ahi ay qayb ka yihiin qalabka shaqada.
Beta-kan cusub waxaa laga heli karaa OTA, markaa haddii aan ka mid nahay barnaamijka beta oo aan horey u rakibnay, waa inaan tagnaa qaabeynta taleefankeenna oo aan riixnaa Cusboonaysiinta Software-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Beta-saddexaad ee Android 10 ee Galaxy S10 hadda waa la heli karaa